Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Alan Shearer Nwa akwukwo akụkọ nke ihe omuma
LB na-enye Full Story of a Premier League Legend best known by the nickname; "Smokey". Anyị Alan Shearer Ịbụ Ụmụaka Akụkọ nke a na-akọ na akụkọ na-adịghị mma Akụkọ na-ewetara gị ihe ndekọ zuru ezu nke ihe omume site na nwata ruo n'oge. Ntugharia ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ndu ya na otutu ihe di na ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole tụlee akwụkwọ Alan Shearer nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ndụ mbido
Alan Shearer mụrụ na 13th ụbọchị nke August 1970 na Gosforth, Newcastle n'elu Tyne, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Anne Shearer na nna, Alan Shearer Snr (onye na-arụ ọrụ ígwè). Ha abụọ bụ ndị nne na nna na-arụ ọrụ.
A gbara onye na-azụ Shearer ume ka nna ya mara bọl mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nke o mere. Ọ gụrụ akwụkwọ na Gosforth Central Middle School na Gosforth High School. N'ịbụ onye na-etolite na-egwu n'okporo ámá nke obodo ya, Shearer na-egwuri egwu n'etiti ebe a n'ihi na ọ gaghị enwe ike ịsọ mpi ma si otú ahụ, na-etinyekwu aka na egwuregwu.
Ọ toro n'ọkwá ya na ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ma ghọọ onye isi nke ụlọ akwụkwọ. Ihe omuma ya biara mgbe o nyere otu ndi otu ulo akwukwo Newcastle City akwukwo n 'onodi asaa na St James Park. Nke a dugara ya n'ịgba bọl dị ka ihe siri ike, si otú a na-edebanye aha maka Wallsend Boys Club dị ka nwata.
Ọ bụ mgbe ị na-egwu maka ụlọ ọrụ Wallsend na Jack Hixon bụ onye na-achọ na Southampton. Jack Hixon nwere mmetụta siri ike na Shearer. A manyere ya ka ọ kwadoro ya maka Southampton mgbe ọ hụrụ Shearer ka ọ na-enwe ihe ịga nke ọma maka ule nke Premiya Division West Bromwich Albion, Manchester City na Newcastle United. Ndị ọzọ, dị ka vidio ahụ dị n'okpuru, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ndụ mmekọrịta
Shearer ama ọdọ Lainya, emi enye okosobode ke ini ẹkedọde ke ukpeme Southampton.
Di na nwunye bi na mpaghara ya na ndị mụrụ ya n'oge Shearer n'afọ nke abụọ na ụlọ ndịda n'ụsọ oké osimiri, ha lụrụ na 8 June 1991 na St James 'Church dị n'obodo ahụ.
N'ụzọ dị iche na nkọwa nke ụfọdụ WAG (ndị nwunye na ndị enyi nwanyị) nke mgbasa ozi site na mgbasa ozi, Shear kọwara Shein dịka onye dị jụụ ma debekwa ya, ọ bụghị nke ọma n'ichepụta ọkwa di di ya mgbe ụfọdụ.
Alan Shearer na Ụmụ
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ atọ; Hollie Shearer, Chloe Shearer na Will Shearer. N'okpuru ebe a bụ ihe osise nke Alan na ụmụ ya atọ. N'okpuru ebe a bụ foto nke ụlọ Alan Shearer.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Personality
Alan Shearer nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Ihe okike, inwe obi ụtọ, mmesapụ aka, obi ụtọ, obi ụtọ, ọchị
Ajọ: Onye mpako, onye isi ike, onye na-eche nanị banyere onwe ya, onye umengwụ, onye na-enweghị mgbagha.
Leo nwere mmasị: Ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, na-enwe mmasị na ya, ihe dị oke ọnụ, na-egbukepụ egbukepụ, ọchị na ndị enyi.
Leo anaghị achọ: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ihu, na a naghị emeso ya dị ka eze ma ọ bụ eze nwanyị
Karịsịa, Alan Shearer bụ onye ndu a mụrụ. Ọ dị oke egwu, ihe okike, inwe obi ike, onye kachasị oke na nke siri ike iguzogide. O nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-eme onwe ya. Ihe nlereanya nke a bu akwukwo ulo akwukwo ya.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Anya ya
Alan Shearer na-ekere òkè dị ka ihe nkiri nkiri, Bruce Willis. Walter Bruce Willis bụ onye na-eme ihe nkiri American, onye na-emepụta fim, na onye na-agụ egwú. Ọrụ ya malitere na nke Off-Broadway ma mesịa na telivishọn na 1980, karịsịa dị ka David Addison na Moonlighting.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Anya
Anya ugogbe anya Alan Shearer bụ ihe dị mkpa maka ya. Ịgba ya ma na-awaghari gburugburu osimiri n'enweghị ihe mgbochi bụ ụdị ntụrụndụ dị mkpa maka Akụkọ Ochie.
Alan Shearer - Nwoke nke na-enweghị uwe na onye nwere obi ụtọ
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ihe banyere Mike Ashley
Onye isi oche nke Newcastle, Freddy Shepherd kwupụtara na, mgbe Shearer gwụchara oge 2005-06 dịka onye nchịkwa aka nchịkwa nke Newcastle, ọ ga-abụ ụlọ ọrụ "Sporting Ambassador" maka oge 2006-07.
Otú ọ dị, na September 2008, a kọrọ na onye uweojii bụ Mike Ashley wepụrụ Shearer site na nkwanye ùgwù a, n'agbanyeghị mkpesa ndị egwu dị ka Steven Taylor na Damien Duff.
Mkparịta ụka Alan Shearer na Mike Ashley- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe
Mike Ashley kpochapụrụ ya wee bịa n'ihi mkpesa Shearer na-akatọ ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-agba ọsọ na mbido nke Kevin Keegan. Ndị ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị akụkọ ndị a.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Post ezumike nká Job
Oge ezumike nká, a mara onye Shearer amara maka ọrụ ya dịka pundit na BBC Egwuregwu nke Ụbọchị. Onye na-egbu ihe mbụ bụ otu n'ime ihe ndị a ma ama na Saturday na-egosi ihe ngosi ma gosipụta dị ka onye nyocha maka egwuregwu FA, European Championship na egwuregwu World Cup.
A na-akatọ onye na-azụrụ Shearer maka enweghị nghọta n'oge ọ bụ nwata, ma ọ na-enweta oge dị mma, bụ nke ọ na-eme ka ọ kwụsị ịchọrọ ịbanye na njikwa. "Mgbe mbụ m malitere ịbanye na 2006, enwere m mmetụta mgbe nile na m ga-alaghachi na njikwa ebe ọ bụ na anaghị m achọ ịkatọ ihe ọ bụla m ga-eme," ọ gwara Gbanyụọ Na Na.
Shearer gara n'ihu ..."Ma ozugbo m mere mkpebi mara mma afọ anọ ma ọ bụ ise gara aga, eleghị anya m agaghị agaghachi n'egwuregwu ahụ. Mgbe ahụ, akụtara m ala ma jiri isi m tinye aka n'arụ. M gwara ndị mmadụ dị iche iche, m nọdụrụ ma mụta ihe, were oge m na-agwa ndị mmadụ okwu, mgbe ahụ, nwayọ ji nwayọọ nwayọọ bụrụ onye nwe ya. "
Ọ dị mkpa ịchọta na ọ bụghị nanị Alan Shearer ka ọ na-enye ọzụzụ na-adịte aka. Shearer weere Newcastle na njedebe nke oge 2008-09 ma ọ pụghị ịzọpụta ha site na relegation na Championship, na-enweta naanị isi ise site na 24 nwere ike.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ebube Net ya
Dị ka Sunday Times Ndekọ bara ọgaranya, netwọk Shearer bụ £ 36m na 2013.
N'elu ego o nwetara site na mgbe ọ na-egwu egwu, nkwekọrịta Shearer gara aga na BBC dị ka pundit Egwuregwu nke Ụbọchị kọrọ na ọ kwụrụ ya £ 500,000 kwa afọ. O tinyere aka na ntinye ohuru na 2016 ma biakwa na netwọk ndi ozo n'uwa, dika Egwuregwu Egwuregwu.
Ọzọkwa, nkwekọrịta nkwado na Umbro nke na-agafe na njedebe nke ọrụ ọhụụ hụrụ akpa ego Shearer £ 1.33m kwa afọ ruo mgbe ọ gwụrụ na 2013.
Alan Shearer Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ebube nke statue
Ihe atụ Alan Shearer bụ nsọpụrụ
Newcastle kpughere ihe oyiyi nke Shearer n'èzí St James Park na September nke 2016. Ọ bụ ịsọpụrụ akụkọ ihe mgbaru ọsọ ya na akụkọ ihe mere eme dị ka a na-ahụ n'okpuru ebe a.
Ụdị Ahụhụ Ọhụụ Alan Shearer
Ihe ncheta ọla a na-akwụ £ 250,000, ezinụlọ Freddy Shepherd kwụrụ ụgwọ maka ya, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ mgbe Shearer nọ n'ebe ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Alan Shearer ịghọ nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.